अञ्चल अस्पताल सुधार्न छलफल::Online News Portal from State No. 4
अञ्चल अस्पताल सुधार्न छलफल
बागलुङ, १८ कार्तिक — धौलागिरी अञ्चल अस्तापको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक सुधारका लागि पहल थाल्नुपर्ने बागलुङको एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् । अस्पताल बिकास समितिले जिल्लाका सांसदसँगको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले अस्पताललाई व्यवस्थित र चुस्त सेवामुखी बनाउन कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति जनाएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री दिननाथ शर्माले चुस्त व्यवस्थापनबाट अस्पतालाई विश्वासिलो बनाउन सकिने बताए । उनले हरेक दिनका समस्या आपसमा छलफल गर्ने बानी बसाल्दा धेरै समाधान हुने बताए । साथै नसकिने समस्या समाधानका लागि राजनीतिक पहल थाल्ने प्रतिवद्धता जनाए । सांसद सूर्य पाठकले मेडिकल कलेज खोजेर चिकित्सक बढाउने र जिल्ला तहमा बस्ने वातावरण बनाउने अभियान थाल्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद मनकुमारी केसीले समस्या बारे मन्त्रालय तहसम्म पुगेर छलफल चलाइरहेको बताईन् । उनले अझै पहल गरेर चिकित्सकहरु बस्ने वातावरण बनाउने भन्दै अस्पताल भित्र अडिने वातावरण समितिले बनाउनुपर्ने सुझाव दिईन् । प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले अस्पतालमा समस्या भएको बताए ।
अस्पतालले समयमा सेवा नदिएकोले गुनासो आइरहेका छन्, भएका जनशक्तीले पनि काम राम्रो गर्न आग्रह गरे । अर्का सांसद कृष्ण थापाले समस्याको जडमा पुगेर समाधान गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुंगानाले अस्पताल भित्रको समस्याबारे छलफल गरेपछि मात्र केन्द्रीय तहमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनक पौडेलले चिकित्सकहरु अनिवार्य बस्न सक्ने वातावरण बनाउन मन्त्रीस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने बताए । ‘तत्कालिन मन्त्री गगन थापाको पालामा बस्न सक्ने चिकित्सक अहिले किन आउन सक्दैनन् ?’ उनले भने, ‘राजनीतिक दवाव बिना राजधानी र शहरमा बस्न पल्केकाहरु नआउने अवस्था भयो ।’ भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्नै परे नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दिपक तिवारी, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेल, अस्पतालका सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनाल, पूर्व सांसद बलाबती शर्मा, पत्रकार प्रकाश बराल लगायतले बोलेका थिए । अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष केवी रानाको अध्यक्षता र सदस्य शालिकराम शर्माको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।